Sida loo nadiifiyo alaabta maqaarka ee guriga
Kuwa kale Talooyin
Tobannaan sano, sharafka iyo xaaladda dharka cagaarka ayaa isbeddelay. Hadda suumanka maqaarka, jackets, jaakadku waxay joogsadeen inay noqdaan kuwo lebis ah iyo labis iyo waxay soo galeen nolol maalmeedka qof. Maqaarka waa wax caadi ah, waa mid daba-dheer, raaxo leh in la xidho oo aan la jarin. Laakiin sida dhar kasta, waxay u baahan tahay daryeel iyo haddii aad si fiican u daryeesho alaabta maqaarka, waxaad kordhin kartaa cimriga
Sidee guriga ugu nadiifiyaa alaabta maqaarka?
Meelaha dhuuban ee maqaarka leh kareemka cad, waxaa lagu diyaarin karaa guriga. Si tan loo sameeyo, baaquli dhaldhalaalka ah, dhalaalay 9 garaam oo beeswax ah oo ku dar 1.5 garaam oo ah carbonate ah iyo 16 ml of turpentine. Isku dar waxaa loo kululeeyo 70 darajo, kareyso si joogto ah, ku dar 40 ml oo biyo ah. Dhuxulada soo baxday ayaa si degdeg ah loo qaboojiyey oo lagu kaydiyaa weel daboolan oo la shandiyey.
Tannins oo siinaya xoog iyo loo isticmaalo dharka maqaarka oo laga saari karo halkaan markaad ku socoto roobka hoostiisa hoostiisa hoostiisa. Midna waa inuusan iloobin in uu qaato dallad, laakiin haddii ay jaakadu qoyan tahay, waa lagama maarmaan in alaabta la qallajiyo xaashiyo ama qalajiyo qalalan oo maqaarka madow leh ku dheji glycerin, batroolka jelly ama saliidda.
Ha nadiifin alaabta cagaarka ah (ha ku jirin wax lagu daro) saliid.
Alaabada maqaarku waa la cusbooneysiiyaa haddii lagu tirtiro ukunta xayawaanka ukunta.
Iska tirtir wakhti ka waqti, tirtir maro nadiif ah, pre-qoyan glycerin. Ama tirtir dusha dibedda cusub ee roodhida leh, waxaa jira saliidyo badan oo muhiim ah, waxay soo celiyaan iftiinka maqaarka.
Maro jajab iyo jackets "cusbooneysiin" leh tampon pre-qoyan biyo saabuun ah oo lagu daro glycerin. Qaliinka ka dib, waa in aad haragga maqaarka ku qallajisaa maro lagu qooyey glycerin aan saliid lahayn ama saliid hilib ah.
Maqaarka oo aad u jilicsan iyo dhuuban waqti ka waqti si looga hortago in xakameyntu lagu tirtiri karo isku dar ah qaybo siman oo cufan ah iyo caano, ka dibna tirtir kareemka cad ee maqaarka.
Gacan yar oo khafiif ah waa in lagu nadiifiyaa saabuun gaas ah, taas awgeed waxay u baahan yihiin in la gashado si fudud gacmaha ama qaabka. Goobaha wasakhaysan ee xoogga leh ayaa xoqay gruel oo ka yimid aalkolada etil iyo zinc oxide. Galoofyada caleenta ah ee ka adkaadey biyaha, dufan leh saliid galbeed ah ama ku hay wax yar oo biyo ah saabuun leh oo lagu daro saliidda cuntada. Ama daawee biyo, acidified khalka.
Haddii aad si khafiif ah u xoqdo gacmo-gashi-gacmeedyo leh talc, waxay heli doonaan iftiin. Haddii talcku daboolo gacmo-gashiga oo ay suuxaan, ruxruxo, oo ma nadiifin gacmahooda iyo daadin.
Waxaan ku nadiifinaa gacmo-gashi iyo waxyaabaha suuska ah sida soo socota:
Qaado 10% ammonia, ku dhaji 4 jeer qadar biyo ah oo nadiifi suufka suufka ah, isbeddel marka ay wasakhu noqoto, ka dibna ku tirtir badeecada dharka suufka leh ee ku qoy biyo nadiif ah oo lagu daro khalka oo qaado 1 qaado oo khal ah halkii litir oo biyo ah.
Si aad u heshid isku dar, qaado 1 koob oo caano ah iyo 1 qaado oo soodhaha ah. Ku tirtir sheyga adoo isku dar ah, ka dibna suufka suufka ah.
Nadiifinta alaabta laga sameeyey suede waa wax ka sahlan maqaarka. Suede wakhti, jacket, joodari, waxaa lagu dhaqi karaa xal yar oo diirran oo budada lagu nadiifiyo iyada oo aan lahayn bleaches iyo supplements. Ku dhaqida dharka si loo dhaqo dhogorta, dhogorta iyo muraayadaha synthetic ayaa daboolaya shuruudahan. Ka dibna badeecada waa in lagu dhaqaa biyo diirran, oo aan dharbaaxin, dharbaaxin, lagu duubay xaashi qalalan ama shukumaan. Ka dib markii la qalajiyo garbaha, sheyga waa in la duubaa, suede ayaa mar kale noqda mid jilicsan. Sidoo kale nadiifinta iyo nadiifinta nadiifinta, laakiin daaweynta guryuhu waxay keeni kartaa yaraynta, haddii suede ay tahay tayada liita. Inkastoo sheyga uu qoyan yahay, waa in la yareeyaa jajabyada iyo jihada dheerta, si aysan badeecadu u yareeynin cabbirka.
Waqti gaaban, iyada oo gacan ka heleysa qaybaha fudud, waxaad ku soo celin kartaa alaabada maqaar oo muuqaal fiican iyo iftiin. Taas macnaheedu maaha in qof walba oo agagaarkaaga ah uu ogaado in gacmo-gashi iyo dharkaaga maqaarku aysan ahayn sannadkii ugu horeeyay. Dabeecadda taxadar leh iyo daryeel habboon ayaa gacan ka geysan doonta in la kordhiyo nolosha maqaarka, iyo tan ayaa lagu caawin doonaa nadiifinta haboon.
U iibinta dharka ilmaha
Talooyin ku saabsan badbaadinta nolol maalmeedka
Xusuusin marka aad xiran tahay saxarada ilkaha
Sidee loo kaydiyaa lacagta miisaaniyadda qoyska?
Sidee dhaqaale ahaan u isticmaalaan kiknoolajiyada
Hadiyad loogu talagalay dabeecadda ilmaha
Maxaa la sameeyaa si aad u xasuusato dhammaan dhacdooyinka, xaqiiqooyinka iyo faahfaahinta?
Saladh karootada leh tufaax iyo miraha
Baradhada roodhida ah
Miisaanka culus ee baaskiilada: mugdiyeha badanaa ayaa gubanaya?
Nikolai Baskov iyo Viktoria Lopyreva ayaa go'aansaday in ay guursadaan Grozny, video
Sidee si dardar leh u go'aamisaa xajmiga manhood
Raashin dhadhan leh maalin kasta
Tababarada Kombiyuutarka ee indhaha
Cocktail oo leh cananaaska iyo rum
Nafaqeyn caafimaad leh iyo baaritaan caafimaad oo caafimaad leh
Maxaa dhacaya haddii ilmuhu leeyahay xasaasiyad?
Maxim Chernyavsky riyadiisa wiilkiisa
Carruurta quudinta ka dib markay sumoobaan
Sida loo galo caanaha naaska ilmaha
Waxyaabaha halista ah inta lagu jiro uurka
Miyaan isticmaali karaa sigaar cabbin, juus khafiif ah xilliga cuntada?
Ku safrida tareenka ilmo: waxa aad u baahan tahay inaad tixgeliso
Siriyada quruxda: maskaha wajiga bocorka